Nin Muslim ah oo looga shakiyay farxad wajigiisa ka muuqatay - BBC News Somali
Image caption Amerika Airline
Laban nin oo ah Muslimiinta Mareykanka ka mid ah ayaa dalbaday baaritaan, kadib markii ay shegeen in lagula kacay naceyb ku saleysan diinta, xilli ay kusii jeedeen Magaalada Dallas ee dalka Mareykanka.
"Sharaf dhac aya maalinkaas ku ahayd noolasheyda, " ayuu yir Cabdullaahi oo la hadlayay weriyeyaasha.
"Amerika Airline iyo dhamaan shirkdaha aan bahwadaaga nahay waxaa mas'uuliyad ka saran badqabka iyo walaaca amni ee ay muujiyeen shaqaalaha iyo rakaabka diyaaradaha", ayaa lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay shirkadda duulimaadyada ee American Airline.
Alkhawaldeh iyo Cbdallah ayaa dhibatada loo geystay ka sheegay shir jaraa'd oo ay qabteen, kaas oo ay soo qabanqaabiyeen Golaha Islaamka ee Mareykanka. 14 kii bishan Sabtembar, labadan nin ee Muslimiinta ayaa qorshuhu ahaa inay ka soo safraan Magaalada Birmingham, iyagoona kusii jeeday Dallas.
Markii shaqalaah diyaaradda ay ku dhawaaqeen arrinkan ayaa Alkhawaldeh waxaa uu maqlay qof kamid ah shaqaalihii diyaaradda oo leh "Waxaa arrintan loo sameeyay sababo amni".
Image caption Shirkadda Amerika Airline ayaa sidookale marar hore lagu eedeeyay inay fuquuq kula kacdo qaar kamid ah rakaabka.
Markii uu Abdullahi weydiiyay waxa dhacay ayaa waxaa loo sheegay in shaqaalihii diyaaradda ay booliska u yeereen, ayna ku yirahdeen "Kuma faraxsanin in aan diyaardda la raacno raggan".
"Waxaa inaga go'an in aan khibard wax ku ool ah kula dhaqano qofwalba oo ku safraya shirkadeena," ayay tiri shirkadda America Airline.
"Kooxdeenu waxay ka shaqeynayaan sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa arrintan, waxaana la xiriirnay Alkhawaldeh iyo Cabdallah, si aynu u ogaano qaabkii ay wax ugu dhaceen."
Horaantii sanadkan ayay ahayd markii shirkadda ay raaligelin ka bixisay haweeney kamid ahayd rakaabka oo lagu yiri "Inaga qari dharka aad xiran tahay oo busto dul saar".
Sidoo kale hey'ado u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuql insaanka ayaa sanadkii 2007 shirkadda America Airline ku eedeeyay inay ixtiraami darri iyo fuquuq kula kacdo qaar kamid ah rakaabka raaca diyaaraddaas.